Ku-iPhone yangempela siphatha ngaphezulu kweminyaka engama-10 ukubika nsuku zonke ngakho konke okuphathelene ne-Apple, ngesimo sezindaba, okokufundisa, ukuhlaziywa, ukubuyekeza, izinhlelo zokusebenza, ukuphepha kanye i-mucho más ngaphandle kokukhohlwa ukungathathi hlangothi, okusivumele ukuba sibe yikho amanye amabhulogi akhulunywa kakhulu eSpanish ahlobene ne-Apple.
Ithimba le-iPhone le-Actualidad lakhiwa iqembu le- abashicileli abanolwazi olunzulu ngemikhiqizo ye-Apple. Eqinisweni, abaningi bethu bayaqhubeka nokubamba i-iPhone yethu yokuqala njengegolide endwangwini. Kubhulogi yethu ungathola isisombululo kunoma iyiphi inkinga, ngokumangazayo njengoba kungabonakala, ngesigaba sethu sokufundisa. Uma ungayitholi, ungaxhumana nomunye wethu ukuze sihlangane, sizame ukuthola isisombululo.
Ungathola futhi ukuhlaziywa okuphelele, ngesiteshi sethu se-YouTube, sayo yonke imikhiqizo eyethulwa yi-Apple emakethe minyaka yonke. Ngaphezu kwalokho, sihlaziya nokwethulwa kwamatheminali abaluleke kakhulu emncintiswaneni oqondile ovela ku-Apple, senza ukuqhathanisa nokuhlaziya iphuzu ngephuzu ubuhle nobubi ... ngaphandle kokulahlekelwa ukungakhethi nganoma yisiphi isikhathi.
Ithimba lokuhlela le-Actualidad iPhone lakhiwa iqembu le- Ochwepheshe be-iPhone kusuka ku-Apple.
Uma futhi ufuna ukuba yingxenye yeqembu le-Actualidad iPhone, gcwalisa leli fomu
IBachelor of Medicine kanye nodokotela wezingane ngokubiza. Umsebenzisi we-Apple kusukela ngo-2005, lapho ngathenga i-iPod nano yami yokuqala. Kusukela lapho, zonke izinhlobo ze-iPhone, i-iPad, iMac, i-AirPod, i-Apple Watch zidlulile ezandleni zami ... Ngokukhetha noma isidingo, bengifunda konke engikwaziyo ngokususelwa ekufundeni amahora, ukubuka nokulalela zonke izinhlobo zokuqukethwe okuhlobene. ne-Apple, yingakho ngithanda ukuhlanganyela okuhlangenwe nakho kwami ​​kubhulogi, esiteshini se-YouTube naku-Podcast.
Ukungena kwami ​​okokuqala ezweni le-Apple ngeMacBook, "abamhlophe". Ngokushesha ngemuva kwalokho, ngathenga i-40GB iPod Classic. Kuze kwaba ngo-2008 lapho ngenze khona ukweqa ngaya ku-iPhone ngemodeli yokuqala i-Apple ekhishwe, okwangenza ngakhohlwa ngokushesha ngama-PDA. Bengilokhu ngibhala izindaba ze-iPhone iminyaka engaphezu kwengu-10. Bengihlala ngithanda ukwabelana ngolwazi lwami nokuthi iyiphi indlela engcono kune-Actualidad iPhone yokukwenza.
Umhleli, umlingisi nomthandi we "Apple" isiko. Njengoba uSteve Jobs angasho: "Idizayini akuyona nje ukubukeka, ukwakheka kuyindlela esebenza ngayo." Ngo-2012 i-iPhone yami yokuqala yawela ezandleni zami futhi kusukela lapho alikho i-aphula elangiphikisa. Ukuhlaziya njalo, ukuhlola nokubona ngokubuka okubucayi lokho i-Apple okufanele isinike kona sobabili ezingeni lehadiwe nesoftware. Ngikude nokuba yi "fanboy" ye-Apple ngithanda ukukutshela impumelelo, kepha ngiyawajabulela amaphutha kakhulu. Kutholakala ku-Twitter njengo @ miguel_h91 naku-Instagram njenge @ MH.Geek.
Ngiyazifela ngayo yonke into ephathelene nobuchwepheshe nazo zonke izinhlobo zemidlalo. Ngiqale ngalokhu kusuka ku-Apple eminyakeni eminingi eyedlule nge-iPod Classic - noma ngubani ongakaze abe nomunye walabo abaphakamise isandla - phambilini wayevele ephethe zonke izinto zobuchwepheshe ayengazenza. Okuhlangenwe nakho kwami ​​nge-Apple kubanzi kepha uhlala ukulungele ukufunda izinto ezintsha. Kulo mhlaba, ubuchwepheshe buthuthuka impela futhi nge-Apple akunjalo. Kusukela ngo-2009, lapho kufika i-120GB iPod Classic ezandleni zami, intshisekelo yami ku-Apple yavuswa futhi okulandelayo okwangena ezandleni zami kwakuyi-iPhone 4, i-iPhone eyayingasaboshelwe esivumelwaneni neMovistar futhi kuze kube manje cishe cishe yonke unyaka ngiya kumodeli entsha. Okuhlangenwe nakho lapha kuyikho konke futhi eminyakeni engaphezu kwengu-12 engibe nayo nemikhiqizo ye-Apple ngingasho ukuthi ulwazi lwami lutholakala ngesisekelo samahora namahora. Esikhathini sami sokuphumula ngiyanqamula, kepha angikwazi ukufika kude kakhulu ne-iPhone ne-Mac yami. Uzongithola ku-Twitter njengo @jordi_sdmac
Ukushisekela ubuchwepheshe kanye nakho konke okuhlobene ne-Apple. I-iPod Touch kwakuyinto yokuqala evela ku-Big Apple eyadlula ezandleni zami. Ngemuva kwalokho kwalandelwa izizukulwane eziningana ze-iPads, i-iPhone 5, i-iPhon 6S Plus ... Ukucabanga ngamadivayisi, ukufunda okuningi nokuqeqeshwa kwa-Apple nengqikithi yayo njengenkampani kunginike ulwazi olwanele lokutshela abangaphakathi nabaphuma Imikhiqizo ye-Apple iminyaka ethile manje.
Sawubona! Ngiqale emhlabeni we-Apple nge-iPod Shuffle, konke bekumangalisa, kungenzeka ukukumangaza ngezingoma ezingahleliwe ozifake kuhlu lwadlalwayo lwe-iTunes. Kwabe sekufika i-iPod Nano, i-iPod Classic, kanye ne-iPhone 4 ... Ngithakaselwa uhlelo lwe-Cupertino ngathola indawo yami ku-Actualidad iPad, ngemuva kwalokhu siphume saya ku-Actualidad iPhone neqembu elikhulu engabelana ngalo ne "geek" "kaCupertino, engiyaqhubeka nokufunda naye nsuku zonke. Nqamula? Yebo, kepha ngegajethi ye-Apple 😉
I-Apple idala amadivayisi ukwenza izimpilo zethu zibe lula. Kepha kungumbono oguqukayo njalo, futhi ngihlala ngithanda ukuba sesikhathini. Ngijabule ukufunda nokuzijwayeza okwenziwayo okusha nama-manzanitas ami bese ngikwabela abafundi. Ixhunywe endaweni yonke eyenziwe Imisebenzi, kusukela lapho i-Apple Watch yami isindise impilo yami.
Wazalelwa eMadrid nonjiniyela wezokuxhumana ngocingo. Ngingumthandi wobuchwepheshe futhi ikakhulukazi yonke into ephathelene ne-Apple. Kusukela i-iPod futhi kamuva i-iPhone yaphuma, ngizihambele nomhlaba we-Apple, ngilungisa futhi ngathola ukuthi ingahlelwa kanjani yonke imvelo lapho yonke imikhiqizo yami ingaxhunywa khona.
Ngiyawathanda amadivayisi kagesi, futhi ikakhulukazi awomkhiqizo we-Apple. Umlutha wami omkhulu ukulalela zonke izinhlobo zomculo ku-iPhone yami, ngenxa yekhwalithi yomsindo wayo omkhulu, yize ngikujabulela nokuzama izinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene ezingaba wusizo ngesikhathi esithile.
I-Architect ne-geek, inentshisekelo nge-intanethi, ubuchwepheshe obusha kanye nomhlaba we-Apple. Ngihlala ngibhala futhi ngifunda ngokuvela kwe-iPhone nakho konke okuphathelene nalo mkhiqizo, engihlala ngikubhala phansi.
Intatheli ekhethekile ku-iPhone. Ngihamba umhlaba ngithola amadivayisi amasha avela kulo mkhiqizo omuhle, lapho kungenzeka khona ukwenza izinto ezimangalisayo futhi ngibe nempilo elula.
ULuis del Barco
Umthandi wobuchwepheshe be-Apple ofuna ukwabelana ngolwazi nokufunda kwabanye. Ngizama ukubeka uthando kukho konke engikwenzayo, ngakho-ke ngiyethemba ukuthi izeluleko zami zizokusiza ukuthi uthuthukise ulwazi lwakho nge-iPhone yakho.
Cristina Torres isithombe sokubamba
Njengamanje ngizinikele emhlabeni we-blogger nasekuhlelweni kwemicimbi. Ngiyayithanda i-Intanethi, nakho konke okuphathelene ne-Apple. Ngiyakujabulela ukufunda amaqhinga amasha we-iPhone ngakho-ke ngiyethemba ukudalula wonke amaqhinga ongawathola ku-smartphone yakho.
Ngaso sonke isikhathi ukulangazelela ukufunda nokufundisa. Ngiyathanda ukubika ngakho konke engikwaziyo, futhi lokhu, okungezwe ekutheni ngihlala ngisesikhathini ku-iPhone, kungisiza ukuthi ngikwazi ukuxhumana kangcono nezindaba zalo mkhiqizo.
Uthando lwami lobuchwepheshe lwazalwa nge-Apple futhi luqala kimi eminyakeni embalwa edlule futhi manje angikwazi ukuyeka ukufunda nokufuna okwengeziwe. Ngalesi sizathu, ngibhalela ukwazisa ngezindaba ezinhle kakhulu ze-iPhone namanye amadivayisi womkhiqizo ngolwazi lwami nolwazi.
Ngishukunyiswa uthando lobuchwepheshe be-Apple, uphawu enginolwazi olunzulu kulo, ekusetshenzisweni kwamadivayisi nakwimibhalo emikhiqizweni efana ne-iPhone. Ngihlale ngisesikhathini ukubhala imibiko nezindaba ezinhle kakhulu.
Usosayensi wekhompyutha, umsebenzisi we-iOS kusukela yaqala ukusetshenziswa nomsebenzisi we-Mac iminyaka engaphezu kwemihlanu. Ngiyakuthanda ukuhambahamba, kepha njalo nge-iPhone yami ukubika ngendlela eqinile kakhulu, nokuthatha izithombe ezinhle kakhulu ezingathathwa nge-smartphone.
Umthandi wobuchwepheshe obusha, nomsebenzisi we-iOS ne-OSX. Vele ngingumlandeli we-Apple, yingakho ngibhala kulo magazini ukuze abafundi bazi ngezindaba ezinhle kakhulu ze-iPhone.
Ukubhala ne-iPhones yizinto ezimbili engizithandayo. Futhi kusukela ngo-2005 nginenhlanhla yokuzihlanganisa. Okuhle kunakho konke? Ngiyaqhubeka nokujabulela njengosuku lokuqala ngikhuluma nganoma iyiphi into entsha u-Apple ayiletha emakethe yezingcingo ze-iPhone.
Ngingumfana othanda umhlaba we-Apple. Ngiyakuthanda ukufunda inqobo nje uma kukhulunywa ngezihloko engizithandayo noma engizikhathalelayo. Ngakho-ke, kuma-athikili ami uzothola izinto ezizosiza osukwini lwakho nosuku nge-iPhone yakho.
Intatheli iyayithanda imagajethi nefoni ephathekayo. Ngihlala ngihlala nginolwazi nge-iPhone, i-iPad, i-Apple Watch ne-MacBook Pro, ngakho-ke inhloso yami ukuthi bonke abafundi bazazi izindaba.